Jiri ezumike ụzọ ihunanya mee ezumike ya
Ihe Ime, di na nwunye, Oge mbu
Di na nwunye na -achọ ọpụpụ ịhụnanya ịhụnanya ekwesịghị ile anya karịa Kildare. Naanị otu awa site na Dublin, nke a bụ mpaghara kwesịrị ịnwe onye pụrụ iche n'akụkụ gị.
Bido ọnụnọ gị n'otu n'ime ọtụtụ ụlọ ezumike ịhụnanya nke Kildare. Nịm na acres 500, kpakpando 5 K Klọb na -enye ụzọ mgbapụ pụrụ iche maka ndị di na nwunye na ndị hụrụ ntụrụndụ n'anya, K Spa Ahụike & Ntụrụndụ akụrụngwa bụ ebe zuru oke maka gị na onye ị hụrụ n'anya izu ike. Ọ bụrụ na -amasị gị ịlaghachi obere ụlọ, Cliff na Lyons na -enye ọmarịcha ime ụlọ abụọ ulo na ọnọdụ pụrụ iche nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na oke ọhịa, ma ọ bụ maka ịpụ n'ụlọ, Killọ Kilkea ga -ebuga gị na onye gị na ya ga -alọta n'oge!
Were Ihunanya Ihunanya!
Wepụta ụtụtụ gị ịgagharị mbara ndị na -adọrọ adọrọ ma hụ gị n'anya. Ụzọ Barrow bụ ije siri ike n'akụkụ oke osimiri Barrow dị jụụ ma ọ bụ banye n'usoro ọgbara ọhụrụ wee malite njem. Okporo ụzọ ịgba ịnyịnya Greenway nke Kildare. Ebe a ma ama n'etiti ndị di na nwunye Kildare, Ogige Ugwu Donadea bụ ọmarịcha ọhịa jikọtara ọnụ na ọdọ mmiri, ma nwee ọtụtụ atụmatụ akụkọ ihe mere eme gụnyere foduru nke nnukwu ụlọ na ogige nwere mgbidi. Ebe agwaetiti dị na nnukwu agwaetiti Ireland, Nnukwu nke Allen ma ọ bụ pụọ n'otu n'ime ọtụtụ golf a ma ama.
Mee Ncheta n'otu n'ime ebe kacha mma Kildare
Enwere ike wulite ncheta na ọtụtụ ebe nlegharị anya na mpaghara akụkọ ihe mere eme; di na nwunye nwere ike na -emikpu onwe ha n'ịma mma nke Ubi Japanese, ebe a ndị ọbịa na -abanye n'ọdọ mmiri dị jụụ ka ha na -aga n'okporo ụzọ 'Ndụ nke Mmadụ' nke na -enyocha ụzọ mkpụrụ obi site na nwa ruo ọnwụ na gafere, ma ọ bụ na -agagharị na ọmarịcha agwaetiti, na ije osimiri, ụlọ nsọ na foduru ụlọ ịsa ahụ na Ụlọ Castletown & Ubi.
Wepụta otu ụbọchị furu efu na ụlọ ahịa mara mma, cafes na ụlọ nri. Obodo Kildare bụ ogige maka ndị na -azụ ahịa na -achọ ụdị okomoko na ọnụ ahịa dị ọnụ ala, mejupụta ụbọchị gị na nri n'otu n'ime ọtụtụ ụlọ oriri na ọ cafụ cafụ ha; ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ iburu onyinye maka onye ị hụrụ n'anya, Ngwongwo ọla ọcha Newbridge bụ ebe kacha mma ịchọta ihe pụrụ iche!
Ihe Imedi na nwunyeOge mbu